Efrijini Beko CS 325000: ukubuyekezwa, izincazelo, imininingwane, imiyalelo kanye impendulo
Esikhathini ezikhethekile Izitolo okudayisa ithengiswe amafriji lemikhiqizo ezahlukene. Omunye izinqumo ethandwa kakhulu phakathi abathengi kuyinto Beko okunokwethenjelwa futhi ezingokoqobo. Amamodeli yalesi brand emakethe Russian, kukhona eziningana. Izibuyekezo ezinhle kakhulu kukhona, isibonelo, kwi CS 325 000 kanye ukuhlela kabusha yayo CS 325000 S. Lezi amafriji ihlukaniswa njengoba izindleko futhi ngaleyo ndlela iyahlukahluka ukusebenza emangalisayo.
Manufactures amafriji le Beko inkampani Turkish CS 325000 elaziwayo Arcelik, ilungu Koc Holding iqembu. Imisebenzi yaso le nkampani yaqala isikhathi eside kakhulu - phakathi nekhulu leminyaka eledlule. In the 50s, lokhu inkampani ngokukhethekile ukukhiqizwa amafriji (futhi imishini yokuwasha), laqala ukuhlela inethiwekhi yayo siqu amasevisi ukulungisa. Lokhu kakhulu anda ukudayiswa ekhiqizwa art wakhe futhi, ekugcineni, Arcelik uthathé ukuma okuholela injongo yaso.
Eminyakeni 90 inkampani waqaphela futhi, njengoba omunye the best kuleli zwe, baqala ukusakaza ukuthekelisa njengoba sha-Turkish. Namuhla, Beko imikhiqizo zidayiswa emazweni amaningi emhlabeni wonke futhi uyawuthanda ukuthandwa okukhulu phakathi besifazane. Naphezu kweqiniso lokuthi ke akwenziwa e-Europe, ukubuyekezwa ngakho kuhlala khona iningi omuhle.
Ukusebenziseka kanye kalula yokusetshenziswa - yilokhu amafriji ngokuyinhloko ovelele CS 325000. Ngokuvamile basuke olwathengwa abanikazi emakhishini ingenkulu kakhulu. Iqiniso lokuthi uJehova cm 60 ukujula ejwayelekile, lokhu ekhaya Imishini has a ububanzi mm 54 kuphela. Ngakho-ke, ukuthola indawo ukubekwa kwayo ngisho ekhishini kweSoviet Khrushchev edala ngeke wenze lutho nobunzima. Lapho ukuthi umnyango imbala Beko CS 325000 ovunyelwe zinkulu ngakolunye uhlangothi uma kunesidingo. A isixazululo omuhle kungaba ukuthenga lokhu imodeli futhi ingadi encane.
Le nqubo siqukethe, like iningi amafriji yesimanje, emakamelweni ezimbili eziyinhloko ngezicabha ahlukene: esiqandisini futhi okokuqandisa. Okokuqala uma lokhu ibekwe ngaphezu kweyesibili. Emashalofini ekamelweni ukupholisa zakhiwe eliqinile le ingilazi omnene. Ngezinye imiphetho zabo, kukhona amabhampa ekhethekile ukuvimbela amanzi emifula uketshezi ngephutha ezichithekile phansi. Uma wayefisa, emashalofini kungase kushintshwe wayefisa ukuphakama isikhundla. Lokhu kuvumela ukusetshenziswa isikhala esiqandisini iyona enengqondo kunazo.
Kukhona kulo imodeli namasheluvu encane obala ukufinyelela umnyango (3 PC.). Ziklanyelwe ukugcina izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba ucezu izimpahla. esiqandisini Ngaphakathi Beko CS 325000 camera yenziwe ngohlobo olukhethekile anti-webhaktheriya, okuyinto kuvimbela ukumuncwa iphunga ezingemnandi futhi usiza ukunweba imikhiqizo eshalofini-ukuphila.
Ukuze ukwazi ukuqiniseka ukuthi lo imodeli nekhwalithi ephezulu, onokwethenjelwa futhi esiwusizo, ngaphansana samanje ithebula ngezimiso zalo eziyinhloko.
ukulondolozwa abandayo yodwa
Ifomu i-ice cubes
Ngakho, esiqandisini kwalesi imodeli akunakubangelwa ukonga ngokuya kwamandla futhi indlela ehlukile umthamo omuhle. Kuyinto enhle futhi ukuthi umsindo akuyona kakhulu. Esimeni kukagesi, lokhu oyisibonelo ungakusiza zisindise umkhuhlane isigamu ngosuku. Ngakho akukho ingozi imikhiqizo nge ukunyamalala voltage amapayipi asivelanga. Ikakhulukazi ngoba, ngomthetho, ukucisha kagesi inkampani amandla eRussia akukwazi amahora angaphezu kuka-2 ngosuku.
Yini ukulungiswa khona
Cishe ezibekiweko efanayo (nomehluko omncane) has esiqandisini Beko CS 325000 S. It ihlukile 325000 nje CS ivolumu ezincane emakamelweni, umbala kanye ukuphakama. Efrijini kule ukuguqulwa yakhelwe 49 l, futhi egumbini esiqandisini - 175 amalitha. Umbala waleli cala kuyi-CS 325000 esiliva. Kulokhu kuba 12 cm ngenhla imodeli isizinda. Ubukhulu balo - 158h54h60 ukubona isikhashana lokhu ukuguqulwa unawo abandayo futhi off-line (16 amahora) .. Kuwufanele esiqandisini side kunaleso 325.000.
Esiqandisini le Beko le CS 325000: yokusetshenziswa
Sebenzisa amafriji Beko ngempela elula. Yiqiniso, lokhu imodeli ibhajethi, ngakho zonke izinhlobo "izinsimbi kanye kuzwakala" yesimanje lula umnikazi ophila kuwo bengekho. Kukhona, isibonelo, in the esiqandisini ukuze umsebenzi ezifana Ayikho Frost. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba eneqhwa ngesandla. Ukwenza lokhu uncika kanye njalo ezinyangeni eziyisithupha. Kodwa, ngokuvumelana emizi eziningi, lokhu msebenzi kakhulu lukhuni. Ice neqhwa ezindongeni efrijini esiqandisini akhiwa nengcosana kakhulu. Defrosting wenziwa ngendlela evamile. Lokho:
Kukhishwe kusuka imbala yonke imikhiqizo. inyama eqandisiwe, inyama nengulube nenhlanzi kuwufanele ngokubeka endishini enkulu metal bayigubungele nge ucwecwe phezu. Ngakho awukwazi uzivumele iqhwa elisenyameni.
Vula umnyango imbala efrijini.
Ngemva kwamahora ambalwa ebusweni wesula nge ekamelweni humidified bese ngaphakathi ethambile, ngendwangu eyomile.
Yiqiniso, noma kunjalo ayikwazi ukuba nezixhobo otkovyrivat ice ezindongeni efrijini ngommese. Ngakho kulula kakhulu ngokuthini uhlelo esiqandisini. Unfreezes le imodeli ngempela fast. Futhi kungani ukukhathazeka mayelana nemikhiqizo lakhishwa nekhwane akuyona zinkulu.
Yiqiniso, ukubheka mthandazo oyisibonelo, udinga hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa efrijini. Ebusweni engaphakathi esiqandisini futhi kufanele wageza ngezikhathi ezithile. Amashalofu e imodeli esetshenziswa ingilazi. Yiqiniso, lokhu kuthuthukisa umklamo esiqandisini futhi ulunika look zanamuhla. Nokho, ingilazi izesekeli, kukhona eyodwa ethile ebalulekile. Ngokungafani ngehele emashalofini enjalo imisiwe air kwegazi ngaphakathi esiqandisini. Ngakho-ke, naphezu elwa namagciwane enamathela izindonga, ngaphandle ukunakekelwa ngenxa, imikhiqizo ekamelweni nge isikhathi aqale ukuba afuthwe ngesibulali iphunga elibi. Ngakho-ke, ukusula ingaphakathi imbala Beko kudingeka ubuncane kanye ngesonto. Yiqiniso, kufanele wageza futhi ingilazi emashalofini ngokwabo.
Namuhla, cishe wonke zikagesi zasendlini Ihayiphamakethe ungathenga isiqandisi Beko CS 325000. Intengo zikagesi eRussia uyahluka ayizinkulungwane 15-17 zonke. Ruble (2016). Inani ezithile kule modeli incike kokubili komphakeli kumthengi esifundeni ohlala kulo. Bekusele kancane nje ukuba ukukhokhela ukuguqulwa 325000 S (mayelana 16-18 izinkulungwane. Ruble).
amafriji Broken Beko kakhulu ezingavamile. Kodwa uma kwenzeka lokhu, cishe, nanoma iziphi izinkinga ukukhanda abanikazi nemishini ekhaya ngeke kwenzeke. Izikhungo izikhungo kuyatholakala cishe kuwo wonke amadolobha amakhulu Russia.
Efrijini Beko CS 325000: umthengi Izibuyekezo
Umbono emizi ngalezi onobuhle, njengoba sekushiwo, isungule kahle. Okokuqala ukudumisa kubo Yiqiniso, ngezindleko eziphansi. Imikhiqizo amafriji ezinjalo, nahlulele by ukubuyekezwa emizi walondoloza kahle kakhulu futhi isikhathi eside kakhulu. Uma wayefisa, abanikazi le imodeli ungalungisa lokushisa ngaphakathi egumbini esiqandisini kunani oyifunayo (kusuka 1 kuya 5, c) ngesandla. Yiqiniso, futhi elula kakhulu. Iqhwa Ungasetha izinga lokushisa lwaluyophola kuya -18 c. Ukuze uthole isibonelo isabelomali nje sibalo emangalisayo.
Hhayi umbono omuhle kakhulu we abathengi kwadingeka umnyango kuphela kule imodeli, noma kunalokho, amapeni abo. Latest Beko CS 325000 esiqandisini ibe ilungiselelo yangaphakathi, futhi liphansi kakhulu. umuntu omude wavula umnyango nje ungakhululekile. Kukhona Yini embi ngalo le-model, abanye besifazane bawuthwale akuzona design ahlukahlukene ikakhulukazi. Beko amafriji bheka ehlonishwa kakhulu. Nokho, abantu abaningi bakholelwa ukuthi isimo wentengo ububanzi Basaba ngempela ehloniphekile.
Okuhle esiqandisini uphinde wathola Beko CS 325000 S umthengi ukubuyekezwa. Pluses kanye minuses kule ukuguqulwa ibhalwe emizi mayelana efanayo. Into kuphela, kubhekwa ukuthi le nqubo ibukeka okuqinile ezingasho yokuqala kuka sabafowabo eziyisisekelo. Umehluko omncane eceleni ezincane kwamakamelo ivolumu imodeli ayinakho usizo cishe azinalo ithonya.
Ngakho, esiqandisini Beko CS 325000, kanye ukuguqulwa yayo CS 325000 S, ingase yabelwe imodeli qualitative esisebenzayo. Yiqiniso, anemali engenayo ephezulu kubantu abavamile ukuthola le ndlela. Nokho, i-imikhaya ehola kancane abasha futhi kahle nje. Ikakhulukazi uma ungeyena abantu abaningi kakhulu abahlala efulethini.
Ukwakhiwa amanzi emthonjeni supply: scheme, imfundo kanye Umgomo we operation
Umoya ohlanzekile ekhaya lakho
Panel Plastic for kuvulandi - izinzuzo kanye nencazelo
Cross-cut ezihluthulelwe zibe yizinkuni. Qhathanisa abakhiqizi
Corrosion of izinsimbi - inqubo nokubhujiswa kwabo
Uyini ukwahlukanisa kangcono ikhaya lakho
Man njengoba silwanyana, isimo njengoba isifo !!!
"Lioton" (gel): ukubuyekezwa. "Lioton" (gel): imfundo, isicelo, kusebenta izidakamizwa
Amafayela XLS - evulekile
Medicine 'Flemoksin'. Izibuyekezo. Izinkomba, lwemithi sokuphuzisa
Comprehensive ukulungiselela herbal "Speman": yokusetshenziswa
Viper Sting: yini okufanele uyenze?
Dream Ukuhunyushwa. Kungani iphupho amabhere
Usizo kwamandla aphezulu bonke izikhathi: isithonjana "Ukwengeza umqondo"
Umsunguli wendlela World Wide Web ucela ukuthi Inthanethi evulekile e-Europe
Okungalapheki obstructive yamaphaphu isifo - usongo empilweni abasebenzisi ugwayi
Proofreader: umsebenzi kanye nezici zayo